LEARNING ENGLISH အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်နည်း (အမှန်နှင့် အမြန်) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ ဒီမိုဝေယံ
LEARNING ENGLISH အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်နည်း (အမှန်နှင့် အမြန်) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
LEARNING ENGLISH အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်နည်း (အမှန်နှင့် အမြန်)
ယနေ့ မြန်မာတို့ ၏အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်အတန်းသည် တော်တော်လေးမြင့်ပါသည်။ ယနေ့ ခေတ် ၉ -တန်း ၊ ၁၀-တန်းအင်္ဂလိပ်စာအဆင့်သည် ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်လိုအပ်သော အင်္ဂလိပ်စာကို နည်းစံနစ်မှန်ကန်စွာဖြင့် စကားပြောလေ့ကျင့်လိုက်လျင် အချိန် ၃-လမှ ၆-အတွင်းဧည့်လမ်းညွှန်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မည်ဟု အာမခံပြောရဲပါသည်။
ကျနော် ဒီစာတမ်းလေးကို ရေးရတာက Australia နိုင်ငံမှာ ယခုအခါ ကျောင်းဆရာမတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ တရုတ်၊ထိုင်း ကဆရာ၊ ဆရာမတွေ Skill Migrant အနေနဲ့ လာခွင့်ရ၊ PR ရနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ထိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာ အလွန်ညံ့သော တိုင်းပြည်နစ်ခုပါ။ သူတို့ ရနိုင်လျင်ကျနော်တို့ မြန်မာတွေက သူတို့ ထက်အင်္ဂလိပ်စာမှာ ယှဉ်စရာမလိုအောင် တော်ပါတယ်။
မူလတန်း ကျောင်းဆရာမ တယောက်ရဲ့ လစာဟာ (တစ်နာရီ-၃၅ ဒေါ်လာ) ဖြစ်ပါတယ်၊။ အထက်တန်းကတော့ ပိုများပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားတွေက ရိုင်းစိုင်း၊ ဆရာတွေကိုစော်ကား၊ ရန်လုပ်တတ်တော့ ဆရာတွေ အလုပ်ထွက်ကုန်ကြပါတယ်။ ဆရာမ လစ်လပ်မှုများနေပါတယ်။
၁၀-တန်းအဆင့် ကျောင်းသားအများစုသည် အင်္ဂလိပ်စာကို We can read, write, listen, but we cannot speak properly. သူတို့ ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်သည် ကောင်းစွာရေးတတ်၏။ ဖတ်တတ်၏။ နားထောင်လျှင် နားလည်၏။ သို့သော် မပြောတတ်ကြ။ ယခုအခါ အင်္ဂလိပ် စကားပြောသင်တန်းများ များစွာအလုပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ လူငယ်တွေအင်္ဂလိပ်စကားပြော လိုက်စားမှု များနေတာကိုပြနေပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ဒီစာတမ်းလေးရေးလိုက်တာပါ ။
ငွေကုန် သက်သာမည်၊ အချိန်ကုန်သက်သာမယ်၊ ကိုယ်အားလပ်ချိန်မှာ အဆင်ပြေပြေ လေ့ကျင့်နိုင်မယ်။ သင်တန်းကို ကားကြပ်နေသည်ဒုက္ခနင့် သွားနေရန် မလို ၊ အချိန်သက်သာ၊ သင်တန်းကြေးသက်သာ၊။ ထိုထက်ပိုသည်က အင်္ဂလိပ်အသံကို ဌာနေအင်္ဂလိပ် ဆရာတွေနင့် သင်ပေးတဲ့ သင်တန်းအတိုင်း Native Speakers ,ဆိုပြီး သတင်းစာမှာ ကြေငြာနေတဲ့ အဆင့်မျိုးကို ကိုယ်ကြိုက်လျှင် ကြိုက်သလောက် လေ့ကျင့်နိုင်ပါမည်။
ယခုရှိနေတဲ့ စကားပြောသင်တန်းမှာ ဘယ်လိုအဓိက ထားသင်သည်တော့ ကျနော်မသိပါ။ မဝေဖန်လိုပါ။ ကြားနေရသည်ကတော့ Grammar ကိုအဓိကထားကြတယ်ကြားတယ် ။ Grammar နဲ့ တင်အချိန်ကုန်တာ များပုံရတယ်။ ကျနော်ကတော့ Grammar ဆိုတာ စာဖတ်များ ။ အသံဖိုင်တွေ နားထောင်ရင်းနဲ့ အလုိုလိုတတ်လာသည်ဟု လက်ခံထားသူ။
ကျနော့်မြေးလေးတွေ။ အထူးသဖြင့် ၃-နစ်ခွဲမြေးလေး။ CAT CAR ဆိုတာရေးပြလို့ ဘာမှန်းမသိသေးဘူး။ A B C D တောင်မသိသေးပါ။ သူကို Have you finished your dinner ? မေးလိုက်လျင် Yes I did (did). လို့ ဖြေပါသည်။ DO လို့ မသုံးပါ ။ မယုံဘူးပြောလျှင်၊ I did, I did already . တကယ်လို့တခုခု လုပ်ထားတာမေးလျှင် Did you do this..No I don't do that. Zakera did that. Zakera ဆိုတာ သူ့ အမ။ DO နင့် DID ကို A B C D မတတ်သေးသူက လိုအပ်သလိုသုံးသွားတာ grammar ပါ ။ အထူး ထပ်ပြီးသင်နေရန် အဓိကထားနေရန်မလိုပါ။
တခါ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောရာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အားနည်းချက်ကိုလည်း သိရန်လိုပါတယ်။ မော်တော်ကား ပျက်လျင် ဆီ၊ ရေ၊ လေ၊ မီး လောက်အခြေခံသိမှ ဘယ်နေရာပျက်တယ် သိပါမယ်။ ပျက်ရသည့်အကြောင်းရင်းသိမှ ပြင်ရလွယ်ပါမယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ အားနည်းချက်က စာကိုအလွတ်ကျက်တတ်သည့် အကျင့် (ဆိုး)ကြီးပါဘဲ။ ဥပမာ မနေ့ မိုးတွေမတရားရွာချလိုက်တာ ရေတွေလှိမ့်လှီမ့်ဆင်းလာတာ တဝုန်းဝုန်း တတ
ဒုံးဒုံးမြည်နေတာဘဲ။ ကားလေးတစ်စီးရေလုံးနဲ့လှိမ့်လှိမ့်ပါသွားပြီး အုတ်နံရံနဲ့ တိုက်ထဲ့လိုက်တာ ဒုန်းဆို အကျယ်ကြီးမြည်ပြီး တံခါးတွေပွင့်ထွက်သွားတယ်လို့စကားနင့်ပြောလျင် လူတိုင်းနားလည်ပါမည်။ အသံအနိမ့်အမြင့်ပါတော့ ဘယ်အကြောင်းအရာကို အဓိကထားပြောသည်လည်းပေါ်လွင်နေပါသည်။
အဲဒါကို စာအလွတ်ကျက်သလိုပြောလိုက်လျင် ဘာပြောနေမှန်းမသိတော့ပါ ။ ဘယ်အကြောင်းကိုအဓိကထားပြောနေတာ မပေါ်တော့ပါ။ နားပင်မလည်ဖြစ်သွားပါသည် ။ ကျနော်တို့ အားနည်းချက်က ထိုနေရာပါ။
အခုတင်ပြလိုတာက အင်တာနက်ပေါ်မှာ Learning English လို့ သာခေါက်လိုက်ပါ ။ ကျလာပါမည် ။ ထိုအထဲက VOA learning English ကိုဝင်လိုက်ပါ ။ အခြားမဝင်ပါနင့် ။ ထိုအထဲက level - 1 ကိုဘဲ ဝင်ပါ ။ News၊American Mosaic, New Words.American History , Science in the news. ကြိုက်တာကို download လုပ်ပါ။ စာကိုပါ ယူထားလိုက်ပါ ။
သို့ မဟုတ် (http://learningenglish.voanews.com/)လို့ ခေါက်လိုက်ပါ ။ အတူတူပါဘဲ ။
အဲဒီက ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို အကြိမ်ကြိမ် နားထောင်ပါ။ သူ့ အတိုင်းလိုက်ပြောနိုင်သည်အထိ လေ့ကျင့်ပါ။ ဆောင်းပါးကို တစ်ပုဒ်လုံး နားမထောင်ဘဲ တပိုဒ်ကိုသာ အကြိမ် (၂၀-၄၀) နားထောင်ပြီးသူ့ အတိုင်းလိုက်ပြောနိုင်မှ နောက်တစ်ပိုဒ်ကို တက်စေချင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်သူဟာ မာန်တက်လာပါတယ်။ ကျနော့် သမီးနဲ့ သားတွေကို ကျနော်သည် ကုမ္မဏီတွေ၊ သံရုံးမိသားစုအိမ်တွေကို ပို့ထားတော့ ကျောင်းအတန်း ၄ နင့် ၆ -တန်းအရောက်မှာ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းစွာ ပြောနိုင်နေကြပါသည်။ သူတို့ အားလုံး ဟီးလေး ဟားလေး မလုပ်တတ်တော့။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်တော့။
ကျနော်ထောင်ကျတော့ သူတို့ က သမီးက ၁၀-တန်းအောင်၊ အဆိုတော်ဘာဘူက ၈-တန်း ။ အငယ်ကိုတိုးက ၆-တန်း။ သမီးက ၁၉ -နှစ်မှာ British သံရုံးကနေ English Diploma ရပါသည်။ သူတို့ သတ်မှတ်ချက် အနည်းဆုံး အသက် ၂၃ -နစ်။ ဘွဲ့တခုရထားရမည်။ သို့ သော် သူ့ကို အင်္ဂလန်ကနေ ဖုံးနှင့် မေးဖြေဖြေရပြီး အင်္ဂလန်က တိုက်ရိုက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကျနော်ထောင်က ထွက်တော့ သား သမီးတွေက လိမ္မာအောင်မြင်မှုတွေရနေတော့၊ အလှူ၊ မင်္ဂလာအခန်းအနားတွေမှာ မိတ်ဆွေတွေက ကျနော်ကလေးတွေကို လိမ္မာအောင်၊ တော်အောင်၊ အောင်မြင်အောင် ဘယ်လို ဆုံးမတာလဲမေးတတ်ကြ၏။ ကျနော် တခွန်းဘဲ ဖြေပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်အောင် သင်ပေးလိုက်ပါလို့။
ကျနော်တို့ လူငယ်လေးတွေ ကိုပြောလိုပါသည်။ ကျောင်းကသင်ပေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်အတန်းဟာ မြင့်ပါတယ်။ ရေးတတ် ၊ ဖတ်တတ် တာက အခရာကျပါတယ်။ ရေးတတ် ၊ ဖတ်တတ်နေပါတယ်။ နားလည်ဖို့ နင့် ပြောတတ်ဖို့ ဆိုတာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေအတွက် လက်လေးတကမ်းမှာ ရှိနေပါတယ်လို့။
အင်္ဂလိပ်စာကို ကျေကျေညက်ညက် အချိန်များစွာ ပေးသင်ထားပြီးမှ စကားမပြောတတ်လို့ခေါက်သိမ်းထားရတာ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်နစ်နာပါတယ်။ ကားရှိတယ် ။ မောင်းဖို့ လိုင်စင်လဲရှိတယ်။ ကားဝှီးဒက်လေးမရှိလို့ မမောင်းရသလိုဖြစ်နေတာပါ။
အားလုံး လက်လေးတကမ်းမှာရှိနေတာကို လှမ်းလိုက်ကြပါလို့။